Madaxweyne Denni oo isugu yeeray wasiirada xukuumaddiisa & Diyaar garow xoogan oo socda
GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in wasiirada xukuumadda Puntland ay badi kuwada sugan yihiin magaalada Gaalkacyo.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo isugu yeeray wasiirada iyo xildhibaanada Baarlamaanka Puntland si ay magaalada Gaalkacyo ugaga qayb galaan munaasibad gaar ah oo lagu xusayo sanad guuradii kasoo wareegtay markii la aas aasay Puntland.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada Garowe ee caasimada Puntland ka baxayey xubno isugu jira xildhibaano iyo wasiiro, kuwaas oo u safray magaalada Gaalkacyo uu ku sugan madaxweyne Denni.
Kooxo fanaaniin ah iyo ciidamo kala duwan ayaa iyaguna ka tagay magaalada Garowe, kuwaas oo gaaray Gaalkacyo si ay ugala qayb galaan madaxda dowladda sanad guurada dhismihii Puntland.
Saciid Denni ayaa magaalada Gaalkacyo gaaray markii uu kasoo laabtay shirkii Dhuusamareeb, waxaana uu ka bilaabay gudaha Gaalkacyo kulamo iyo shirar gaar gaar ah oo uu la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Amaanka magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana socda diyaar garow xoogan oo loogu jiro munaasibad sanad guurada 22-aad ee dhismaha Puntland oo caawa ka dhici doonta madaxtooyada Gaalkacyo.
Marka laga yimaado munaasibada caawa dhici doonta ayaa waxaa magaalooyinka Puntland iyo deegaano badan ka dhacay munaasibado kala duwan oo loogu dabaal degayey dhismaha Puntland oo ay kasoo wareegtay 22 sano.
Dani haday daacada ka tahay 5 sano sanad kasta ha joogo gobol sidaa hadaa galkacyo uu joogaa sanadka danbe insha alah buuhoodle ha tago ha ku ku qabto sanad guursada 23aad kan kale baran ha tago markaas baa puntland loo dhan yahay.
By awbarakaale barako
DANi.. waa Bakh bakh le.. Buuhoodle ma tegi karo waa la tooganayaa.